Projects - Guangzhou Beyond Lighting Co., Limited
Ogo oru ngo
Akwa na -atụ aro ọkụ
Edu asacha na -akpụ akpụ isi ọkụ
Osisi na -akpụ akpụ
Edu na -eso ntụpọ ntụpọ
Ọkụ profaịlụ ntụpọ ọkụ
Ikanam Fresnel Ìhè
Ọkụ na -enwu ọkụ
Ọkụ static ndị ọzọ
2021 YuNan A.rt Parụ ọrụ
Mpekere 100 1940Z (19*40W isi mbugharị mbugharị mbugharị) na -arụ ọrụ arụmọrụ a wee nata ọtụtụ otuto n'aka ndị na -ege ntị na ndị na -emepụta ọkụ. O juru ndị mmadụ anya na ikike agwakọta ya na ncha ya na -enwe ihe ịtụnanya maka ịrụ ọrụ nwayọ ya. Dị ka igwe na -asachapụ 760 Watts, ọ ka na -arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ihe nkiri a.
Isi iyi ọkụ: 19x40W RGBW 4-in-1 Led
Ọdịdị mbugharị: 6.5 Celsius -45 Celsius
Ọnọdụ DMX: 19/27 Ch
A rụnyere nko nke apịachi
Mmetụta mgbanaka LED 3
Ememe ncheta afọ 100 nke ụlọ ọrụ China Aerospace Science and Technology Corporation
Isi na -emegharị anya anya 7x60W na -ewu ewu n'ezie na -eji maka ụdị arụmọrụ ọ bụla, ememme a na -ewe iberibe 150 760 iji nyere ọkwa a aka ngosi na mmetụta dị ebube.
2021 <Olu dị oke ọnụ> Mmemme TV
Is bụ otu mmemme TV nke China na -ekpo ọkụ nke ukwuu na 2021. N'ime mmemme a, ndị otu egwu na -achọ ọkara egwu ọzọ. Oge nke ọ bụla, ndị mmekọ isii na -efe efe na -akwadokọ abụ abụọ abụọ. Otu n'ime ha na ndị na -agụ egwu bi ebe a na -arụkọ ọrụ ọnụ wee mee abụ ọlaedo, wee mee "asọmpi maka abụ ọlaedo akwadoro"
2021 Ememme egwu ọdịnihu Sichuan
Ememme egwu ọdịnihu Sichuan a na -eme otu ugboro n'afọ, n'afọ a, iberibe 120 nke anya anya anya 19x40w na -agagharị agagharị karịa ọkụ ahọrọ maka ọrụ a.
2021 Ụlọ ihe nkiri Yunnan
Isi na -emegharị anya anya 24*60W karịrị ọkụ ọkụ ọhụrụ 2021, nnukwu ụlọ ihe nkiri China Yunnan nyere iwu ka iberibe 100 kwadebe maka ihe nkiri. Dị ka onye ọbịa ahụ kwuru, ọkụ gbachiri ebe egwuregwu ahụ dum. Nke a na -egosi na ọkụ a ọ bụ etu o siri zuo oke!
Isi iyi ọkụ: 24*60W 4in1 RGBW Led
Oghere osisi: 3.5 ° -45 °
Ike oriri bụ 1500W
A na -ejikwa Led ọ bụla na -achịkwa otu, ọ dịkwa mma ịgbacha agbacha na flicker n'efu
N'ime ugbu a, karịa voltaji, nchekwa ọkụ
Enwere ike ịgụ ozi ọrụ ọkụ na menu
Dimenison bụ 354*444*477mm na Ibu 25 kgs
Expo nnukwu ụlọ ọrụ China Internation
2021 Ememme Muscic China XiAn
Ememe mmeghe nke egwuregwu Chongqing nke isii
2021 Xi 'ihe ngosi ọgba tum tum
Kpọtụrụ anyị Idenye aha